शिक्षा / स्वास्थ्य 65 पटक पढिएको २०७४ बैशाख २९ शुक्रवार
नशा कसरी च्यापिन्छ?
कम्मर बन्नका लागि मेरुदण्डको विशेषगरी लम्बर भटेब्रा र स्याक्रम भटेब्रा भाग एवं दुबै भटेब्राको बिचमा हुने एक लचकदार बस्तु डिस्क मेरुदण्डको साइडमा मांसपेशी र नशाको प्रमुख भूमिका रहन्छ । दुईबटा मेरुदण्डको बीच भागमा रहेको डिस्क एक लचकदार वस्तु हो । जसले कम्मर चलाउन मद्दत गर्छ । डिस्क जेली पदार्थले बनेको हुन्छ । जसलाई फाइब्रस रिङ्गले घेरेको हुन्छ । कुनै कारण त्यो डिस्कबाट निस्कने नली (स्पानल क्यानल) वा साइडको नशा(नर्भ रुट) लाई दबाइ दिन्छ । यस्तो अवस्थालाई प्रोल्याप्स एन्टर भ्रटेब्रल डिस्क भनिन्छ । कुनै पनि डिस्क प्राल्याप्स हुन सक्छ तर धेरै जस्तो बिरामीलाई पाचौं नम्बरको लम्बर भटेब्रा र पहिलो स्याक्रल भटेब्राको बीचको डिस्क बढी प्रोल्याप्स हुन्छ । डिस्क प्रोल्याप्सको साइज र अवस्थामा आउने फरकको कारण लक्षण देखिन्छ ।
लामो समय उभिदा वा हिड्दापनि दुखाई हुनु खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने वा लाटो हुनु
नशा धेरै च्यापियो वा लामो समयसम्म उपचार भएन भने खुट्टा सुक्दै जान्छ र पछि गएर राम्रो सँग चल्दैन र पुरै लाटो हुन्छ । कहिले काहीँ दिशा पिसाब रोक्न गाह्रो हुने हुन्छ ।
लामो समयसम्म कुर्सीमा बस्ने लामो समयसम्म उभिएर काम गर्ने
नशा च्यापिएको कसरी थाहा पाउने र?
धेरै जसको नशा च्यापिएको लक्षणका आधारमा नै थाहा पाउन सकिन्छ । चिकित्सकले जाँच गर्दा गरिने केही परिक्षणबाट धेरै पत्ता लगाउन सकिन्छ । जस्तै बिरामीलाई उत्तानो सुताएर खुट्टा सिधा पारेर उठाउन लगाउने परिक्षण (कचि) टेष्टले पनि धेरै प्रतिशत नशा च्यापिएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । साथै नशा च्यापिएको कारण र अवस्था पत्ता लगाउन एमआरआई पनि गरिन्छ ।
नशा च्यापिएको समस्यामा विशेषत विभिन्न प्राकृतिक उपचार पद्धती प्रभावकारी मानिन्छन् । जस्तै अकुपञ्चर फिजियोथेरापी (क्ट्रो तथा एक्ससाइज दुबै) थेरापिटिक मसाज लगायत प्राकृतिक चिकित्साका तरिकाहरु यी थेरापीहरुको उचित प्रयोगको साथै सुरुकै अवस्थामा आरम गर्नु जरुरत हुन्छ । पूर्ण आराम साथ अकुपञ्चर, फिजियोथेरापी र प्राकृतिक चिकित्सा विधिका विभिन्न तरिकाबाट पनि उपचार गर्दा अप्रेशन गर्न जरुरत हुदैन । विश्वव्यापी अनुसन्धानबाट पनि नशा च्यापिएको समस्यामा ८५ प्रतिशत बिरामीलाई अप्रेशन विना उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । नशा च्यापिएको बिरामीको खुट्टा सुक्यो, चलाउन गाह्रो भएमा र पिसाब रोक्न नसक्ने भयो भने अप्रेशन गर्न जरुरत हुन्छ ।
सामान्य लक्षण देखिनासाथ परिक्षण गराउने र उपचार गर्ने अगाडी झुक्दा विशेष ध्यान दिने गाडीमा यात्रा गर्दा बेल्टको प्रयोग गर्ने र खाल्टा खुल्टीबाट जोगाउने सकेसम्म मोटरसाइकलको प्रयोग नगर्ने, गर्नै परेमा बेल्टको प्रयोग गर्ने लामो समयसम्म कुर्सीमा नबस्ने, पलेटी कसेर नबस्ने मोटोपना कम गर्ने हिल जुक्ताको प्रयोग नगर्ने फिजियोथेरापिष्टको सल्लाह बमोजिम नियमित एक्ससाइज गर्ने